MITR Beginner Rank ရှိသူများ တောင်းဆိုရန်
Myanmar IT Resource Forum » Garbage » MITR Beginner Rank ရှိသူများ တောင်းဆိုရန်
1 MITR Beginner Rank ရှိသူများ တောင်းဆိုရန် on 31st January 2010, 8:26 pm
ကျွန်တော်တို့ Forum ရဲ့ မန်ဘာများအတွက် Downloading Service ကို ၁ . ၂ . ၂၀၁၀ မှစတင် ဖွင့်လှစ်ပြီဖြစ်ပါသည်။ အထက်ပါ Downloading Service ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် Forum ၏ Member များအနေနှင့် သိထားသင့်သော အချက်အလက်တစ်ချို့မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့၏ Rank သည် MITR Beginner Rank ဖြစ်ပါက New User Rank နှင့် Reader Rank တို့မှာပါရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေထက် ပိုပို Advanced ဖြစ်တာတွေပါလာမှာပါ။ ထို့အပြင် Hacking ပိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ Basic ပိုင်းဆိုင်ရာ E-book တွေ Video Training တွေ စတာတွေပါ ပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အစရှိသည့် IT Field Data များကို DVD တစ်ချပ်စာ 4.7 GB ရှိသည့် Data များကို အခမဲ့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် အထက်ပါ IT Field နှင့် ပတ်သက်သော Data များကို အချိုးကျကျထည့်သွင်း ပေးထားမှာဖြစ်ပါသည်။
အထူးသတိပြုရမည်မှာ MITR Beginner User များအနေဖြင့် အထက်ပါ DVD ခွေကို ဤတော့ပစ်အောက်တွင် တစ်ကြိမ်သာတောင်းဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်တောင်းဆိုချင်သည်ဆိုပါက MITR Student Rank ဖြစ်မှသာလျှင် ထပ်မံတောင်းဆိုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိ MITR Beginner Rank ရှိသူများက MITR New User DVD၊ MITR Reader နှင့် MITR Beginner Rank DVD3ချပ်စလုံး လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။